“Ny hiranay fahiny” : hiray sehatra ireo mpanakanto 80 taona | NewsMada
“Ny hiranay fahiny” : hiray sehatra ireo mpanakanto 80 taona
Raikitra amin’izay! Raha toa ka nokasaina hotontosaina ny 29 avrily lasa teo, voatery nahemotra ilay fampisehoana “Ny hiranay fahiny”. Fantatra kosa izao fa hatao ny alahady 27 mey ho avy izao, hanomboka amin’ny 3 ora tolakandro, etsy amin’ny CCEsca Antanimena ihany izany.
Ity ilay fampisehoana hampiarahana an-tsehatra ireo mpanakanto manodidina ny 80 taona, kanefa mbola milomano ao anatin’ny mozika hatrany. Hizara ny kantony mandritra izany ry Henri Ratsimbazafy ,i Gaston Andrianony,i Biry Ny Railovy ary i Salomon. Fantatra ihany koa fa hasaina manokana amin’ny seho i Abel Ratsimba sy i Jean Rossinah.
“Hisy ny fampiaraham-peo, ankoatra ny sehon’ny tarika tsirairay. Homem-boninahitra ireto andrarezina ireto, ka hisy ny mari-pitiavana hatolotra azy ireo”, hoy ny nambaran’ireo mpikarakara avy amin’ny See You sy ny Best Pro. Araka ny efa heno anatin’ilay hira “medley”, hanakoako indray ny “Anao no nindramiko”, ny “Minia aho ny hanadino”, ny “Ao ihany ve?”, ny “Tadidinao”, sns.
Tsiahivina fa efa nampanantena ny mpikarakara fa mbola manan-kery ireo karatra efa lafo mialoha.